Oprah Winfrey: Waligeey kama shalaaynayo inaan caruur dhali waayay. - Celebrity News - Jilaa News - Falanqeynta Fanka iyo Fanaanka
Haweeyendii laheyd Oprah Show ee telefeshinka caanka ka ah ee Mareykanka u dhalatay ee Oprah Winfrey ayaa waxaa wareysi lagala yeeshay arrimaha nolosheeda ay kaga dhawaajisay in aysan waligeed u qoomameyn ama aysan ka shalaayn doonin in ay caruur dhali waysay oo ay doorka hooyanimo haleeli waysay, Oprah ayaa tiri arrinkaas waa mid igu culus maxaa yeelay ma lihi dulqaadna hooyannimo.
Oprah oo 63 jir ah ayaa waxey 31 sano saaxiib la aheyd ninkeeda Stedman Graham oo 65 jir ah kaasoo ay wada noolaayeen intaas oo dhan waligeedna aysan is guursan. Oprah ayaa sidoo kale sheegtay in ay hooyo ilma ay dhashay u aheyn laakiin ay hooyo u tahay dhamaan caruurta dunida , waxeey xustay in ay dhowr caruur ah dalka Koonfur Afrika ku korisay kuwaasoo ay siisay fusado waxbarasho iyo nololeed.
Waxey Oprah oo Milyaneerad ah guul ka gaartay show geedii Oprah winfrey la oran jiray ee ka baxi jiray telefishinada aduunka dhan kaasoo ay soo gabagabeysay , waxeyna haatan sameysatay kanaal u gaar ah oo la yiraahdo OWN oo u taagan Oprah Winfrey Network.
Mahershala Ali oo noqday muslimkii ugu horeeyay ee hela abaalmarinta Oscar